Kuphela ukuzinaka akha ama-blocks
UNKSZ Pamella Ndlovu onenkampani yokwenza ama-blocks esendaweni asebenza kuyo Isithombe: Sithunyelwe
PHILI MJOLI | March 5, 2020
USEQALE inkampani eyenza ama-blocks owesifazane waseMbali, eMgungundlovu, obesebenza ezinkampanini zokwakha ebhekele ezokuphepha.
UNksz Pamella Ndlovu (26) oke waba yilungu lomfelandawonye nabanye abantu, bethi bazokwenza wona ama-blocks, usesungule eyakhe inkampani, iPam’s Blocks.
Uthe uyazi ukuthi abantu abaningi bayathanda ukuvula izinkampani zokwakha kodwa iningi labo lifuna ukuthola imisebenzi yokwakha, yena ubehlale enesifiso sokuthi angene kodwa akhe ama-blocks, okuyiwo adingekayo uma kwakhiwa.
“Ngiwumuntu othandayo ukwenza imisebenzi ejwayele ukwenziwa ngamadoda. Angikholwa ukuthi ubuncane bomzimba wami kukhona lapho bungangivimbela khona.
“Umkhakha wokwakha ngilokhu ngawuthanda ngisemncane. Ngo-2014 ngingene ohlelweni lokufunda ukwenza ama-blocks,” kusho uNksz Ndlovu.
Uthe akazange aqale ukuwenza ama-blocks ngemuva kokuphothula ukuqeqeshwa. Uthe ubesafuna ukufunda okunye kulo mkhakha. Ngakolunye uhlangothi nonina ubehlala emkhuza uma ekhuluma ngokuqala leli bhizinisi, ethi ngeke alunge ngoba unomzimba omncane, lo msebenzi uyagqilaza.
“Ngibe sengenza izifundo zokubhekela ezokuphepha uma kwakhiwa, ngase ngenza nezokuhlelwa komsebenzi wasehhovisi. Konke lokhu bengikwenzela ukuthi ngizihlele kahle. Bengikwazi ukwenza konke ngedwa ngesikhathi ngisaqala ukusebenza ngoba ngeke ngikwazi ukuqasha abantu kusaqalwa,” kusho uNksz Ndlovu.
Uqhube wathi ngesikhathi esebenza ubone ukuthi umsebenzi wokwakha unezikhawu, kunesikhathi lapho kumiwa khona ngenxa yesimo sezulu noma kunezinkinga zokukhishwa kwamathenda.
UMA engekho emsebenzini uNksz Pamella Ndlovu uthi uyaziphaqula kodwa akuseyona into ayenza zonke izinsuku ngoba kumele agcobe izinto zokuvikela ilanga
“Ukusebenza ubuye ume, kungenze ngakhumbula ukuthi nginekhono lami lokwenza ama-blocks engingalisebenzisa ngesikhathi ngisamile ukusebenza lapho ngiqashwe khona. Ngase ngifuna indawo yokusebenzela, ngaqala ukusebenza. Njengamanje ngisebenzisa umshini ongasebenzisi ugesi. Ngenza ama-blocks awu-40 ngosuku,” kusho uNksz Ndlovu.
Uthe kuqale kwathenga abantu abangomakhelwane bendawo asebenza kuyo, abangadingi ukudilivelwa, wagcina esenamakhasimende akude, wabe esebenzisana nomuntu oneveni.
“Ngiyazi ukuthi kumele ngisebenze kanzima okwamanje ngoba ngisaqala. Ebhizinisini kuba nzima ngaphambi kokuthi kube ngcono, yingakho kungangikhathazi ukuthi ngivuka ekuseni ngiyosebenza elangeni, ngize ngibuye ekhaya selishonile ilanga.
Angikwazi ukuziphophotha, ngiziphaqule njengamanye amantombazane angangami. Ngiyazi ukuthi sizofika isikhathi lapho ngizoba ubasi kodwa ngifuna ukuba ubasi owazi wonke umsebenzi,” kusho uNksz Ndlovu
Uhlenga isizwe ngokusiluleka ngezinhlelo zezezimali